क्रिकेट, किनभने यो मलाई मन पर्ने खेल हो र म पनि राम्रो खेल्छु ।
कुमार कट्टेल, अभिनेता
म फुटबल लभर हुँ । राम्रो फुटबल खेलाडी पनि हुँ । त्यसैले म फुटबलर बन्थें होला ।
चेस खेलाडी बन्थें होला । चेसबाट जीवन जिउने कला सिक्न सकिन्छ ।
फुटबल निकै मन पर्छ । त्यसैले फुटबल खेलाडी बन्थें होला । सायद अहिले मोडलको सट्टा खेलाडी भएको भए विश्वकपका लागि प्रयास गरिरहेको हुन्थें कि ?
जेम्स बीसी, मोडल
म फुटबल खेलाडी हुने थिएँ, किनभने यो खेल बुझ्न पनि सहज छ । साथै सानैबाट फुटबलको वल्र्डकप हेर्थें, जसले गर्दा फुटबलप्रति मोह बढ्यो । कहिलेकाहीँ अहिले पनि फुटबल खेलिरहेकै हुन्छु ।
ब्याडमिन्टन खेलाडी बन्थें होला, किनभने मलाई यो खेल निकै मन पर्छ र म राम्रो खेल्छु पनि ।
म फुटबल खेलाडी हुने कुरामा दुईमत छैन, किनभने सानै बेलादेखि म फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुन्थें । त्यसो त मोजाको भकुन्डो बनाएर भए पनि खेलिन्थ्यो । आखिर पेलेको पनि सुरुवात त मोजाको बलबाटै भएको हो नि !
कल ब्रेक, म्यारिजभन्दा कुनै खेलमा रुचि भएन । तैपनि क्यारमबोर्ड खेलाडी बन्थें होला, तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएन, के गर्नु ?
अवश्य पनि म फुटबलको खेलाडी हुन्थें होला, किनभने म सपनामा पनि फुटबल देख्ने मान्छे हुँ । फुटबलप्रतिको यो मोहले गर्दा होला, संसारभरका फुटबल खेलाडी चिन्छु ।
कुस्ती र बक्सिङको खेलाडी बन्थें होला, किनभने यी दुई खेलमा राम्रो दक्खल राख्ने खेलाडी हुँ म ।
किरण केसी, अभिनेता
म फुटबलर हुन्थें होला, किनभने मेरो सानैदेखि फुटबल खेलाडी बन्ने अर्को सौख थियो ।
म फुटबलको खेलाडी हुन्थें । किनकि सहज रूपमा पाइने र सबैले मिलेर खेल्न मिल्ने एउटै मात्र खेल फुटबल नै हो । क्लब–क्लबबीचको प्रतिस्पर्धाले समाज जोड्ने आपसी भाइचारा सद्भाव पनि बढाउने खेल फुटबल हो जस्तो लाग्छ । यो खेलको अद्भुत पक्ष भनेको टेक्निकल्ली पनि खेलिने अनि पूर्ण एथलेटिक्स पनि फिल गर्न पाइने हुनाले अन्य शारीरिक व्यायाम नै गर्न नपर्ने हुनाले म फुटबल खेलाडी नै हुन्थें होला ।
म फुटबल खेलाडी हुन्थें । किनकि फुटबल खेल विश्वकै सुप्रसिद्ध खेल पनि हो र म अन्य खेलभन्दा फुटबलमै बढी इन्जोय गर्छु ।
सिर्जना खत्री, गायिका
म पौडीको खेलाडी हुन्थें होला, किनभने यो खेल स्वास्थ्यका लागि पनि उपयुक्त छ ।
फुटबल अथवा क्रिकेटको खेलाडी हुन्थें होला । किनकि दुवै खेल खेलेको छु र रुचिको त कुरा नगरौं ।
म भलिबल खेलाडी हुन्थें होला, किनभने म अग्ली छु र मलाई यो खेल असाध्यै मनपर्छ ।
दिपिका प्रसाईं, अभिनेत्री
सानैदेखि फुटबल एकदमै मन पथ्र्यो । त्यसैले फुटबल खेलाडी नै हुन्थें होला ।
सन्तोष सेन, निर्माता/निर्देशक
लुँडो खेलाडी बन्थें होला, किनभने हिजोआज फुर्सदको धेरैजसो समय यही खेलमा बित्छ ।
मैले जीवनमा पहिलो पटक बुझेको खेल भनेको क्रिकेट हो । त्यसैले क्रिकेट खेलाडी बन्थें होला ।
अक्षरको खेलाडी त अहिले पनि छु । खासमा फुटबल खेलाडी हुन्थें होला, किनभने मलाई सबैभन्दा मन पर्ने खेल फुटबल हो ।
हुन त सबै खेलको आ–आफ्नै महत्त्व हुन्छ । यदि म खेलाडी भएको भए कङ्फु च्याम्पियनसिप हुन्थें होला, किनकि नेपालमा कङ्फु लेडी देखिँदैन ।
मलाई कुनै पनि खेल र खेलाडी भनेपछि एकदम मन पर्छ । म सानो हुँदा क्रिकेट खेल्थें । त्यसकारण अहिले पनि कहिलेकाहीँ खेल्छु र खेल्न नपाए पनि हेरेर आनन्द लिन्छु । त्यसैले म खेलाडी भएको भए पक्कै पनि क्रिकेटकै हुन्थें होला ।
खेलाडी नै भएको भए त क्रिकेट कै हुन्थें ।
विद्यार्थी जीवनमा धेरै खेलमा भाग लिन्थें । पछि पढाइमै केन्द्रित भएँ । सानोमा मलाई कराँते, भलिबल र रनिङ निकै मन पथ्र्यो । त्यसैले खेलाडी भएको भए कराँते खेलाडी हुन्थें होला ।
म त्यतिसाह्रो खेलप्रेमी त होइन, तर यतिचाहिँ हो कि मैले खेलाडीहरूको क्रेज विश्वव्यापी हुन्छ भन्नेचाहिँ बुझेको छु । त्यसैले फुटबलको विशेष गरी विश्वकपमा चासो राख्छु, जसले गर्दा फुटबल खेलाडी नै हुन्थें कि !